A Heat Pombi papi sezvo pedyo sezvinobvira kuti pool filtration hurongwa. Rakagadzirirwa kushandiswa kunze kwemisha hakurevi chinhu chifukidzo pamusoro okunze. Kutaura chokwadi kana ari Heat Pump chakafukidzwa panguva kushanda hazvizorevi kuita optimally.
Hapana kutarisirwa waiti munhu Heat Pump sokunge mhepo conditioner. Simply bvisa mashizha upi, uswa, bepa, etc. izvo neapo anounganidza kubva mumhepo. Dziva kemesitiri vanofanira nguva dzose kuramba akadzikama. The evaporator grills vari zvemapuranga kudzivirira ngura. Zvisinei kana uchigara pedyo munyu-mvura ezvinhu ungada hosipaipi pasi kunze evaporator coils kubatsira kudzivisa kuvaka munyu uye ngura.
Ehe. Asi zvose zvinoenderana kukura dziva uye nenguva gore. Heat pombi dzinoitwa kuramba dziva tembiricha zuva nezuva. Kana kupisa Pombi kadikidiki zvakanaka kusvikira padziva kukura, kamwe tembiricha zvaaida zvasvika izvozvo vachangoerekana kuramba kuti tembiricha mwedzi rose.
Electricity chakatengeswa pedyo chikwata inonzi kilowatt-awa. Mumwe kilowatt-awa akaenzana 3412 BTU. BTU anomirira British Thermal Unit. Zviri chairema chiyero kuti zvimwe kupisa pombi vagadziri vanoshandisa pamusoro nokurondedzerwa dzavo.
COP anomirira Coefficient maitiro semuna. Nhamba simba goho kuti simba chiyamuro. Izvi novimba ambient mhepo tembiricha uye tembiricha iri mvura pool. It anokuudza simba kunyatsoshanda Rating kupisa pombi.
Sezvo vose pool kudziyisa gadziriro uri zano kushandisa dziva butiro kana pool haisi kushandiswa. Izvi achachengeta kwemvura (mukuru kupisa kurasikirwa) kushoma uye saka kuderedza zvinonyatsorehwa dziva kudziyisa yokufambisa uye mwoyo vasingadiwi. A dziva pabutiro anogona kucheka zvachose kupisa kurasikirwa ne50% kusvika 95%.
Aquark kwakaita kupisa pombi vari nemafungiro pamusoro unhu zvinoriumba, kunyange pasina mumwe nanzva nazvo, dziva kupisa pombi nyore kwazvinogumira 10 kusvika 20 makore. Asi, pamwe yokuzvigadzirisa zvakanaka, redu dziva kupisa pombi anogona sezvariri kwoupenyu hwose.
The Main reMbiru itsva EU F-Gas Rules vari kuderedza choutsi uye kutamira kune hwakaderera GWP mhinduro. Izvi zvinosanganisira danho pasi kudyiwa HFCs uye zvinoderedza 37% kubudikidza 2020 uye 79% kubudikidza 2030. Pakazosvika 2025 Single Split A / C enyika nezvishoma pane 3kg refrigerant mutariri anofanira iine refrigerant ane GWP.
R32 ane zvakafanana anoshanda kuitiswa R410A kumativi 12-26 Bar (174-377 Psi) Zvisinei R32 ane kugona nani kuchinjana kupisa-mutoro pane R410A uye anonunura yepamusoro kukwanisa kupfuura R410A kuita hurongwa rikurumidze.
R32 ane yakaderera GWP pane R410 uye anoshandisa 30% shoma refrigerant mutariri kubereka akaenzana kutakura. Somugumisiro yose CO2 achine kunogona kuderedzwa kumativi 77%.
Kazhinji rezasi ari GWP dzakanga padanho flammability, R32 hakuna kusiyana. R32 akapiwa kupatsanura A2L uye Classified zvinobata moto muchikwata A2. Kupatsanura kuti Directive 67/548 / EEC & 1999/45 / EC: F +; R12 Aiva zvinobata moto. Naizvozvo chete ruzivo uye zvakanaka akarayira vanhu vanofanira kugadzirisa magasi zvaoma.